Dawlada Mareykanka oo shaacisay dhaqaalaha ay Somalia ku bixineyso 2019 ⋆ Soomaaliweyn | Wararka Iyo Warbixinada Dalka | Somalia's Latest News
Home Wararka Dawlada Mareykanka oo shaacisay dhaqaalaha ay Somalia ku bixineyso 2019
Dawlada Mareykanka oo shaacisay dhaqaalaha ay Somalia ku bixineyso 2019
Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ay Soomaaliya ku maalgalin doonto boqolaal milyan oo dollar oo loogu tala galay in sare loogu qaado Kabayaasha dhaqaallaha iyo Arrimaha Gargaarka.
Qorshahan ayaa qeyb ka ah qorshe ballaaran oo dowladda Mareykanka ay ugu tala gashay dalal ay ka mid ah tahay Soomaaliya oo ay ka jiraan dhibaatooyin ay ka mid yihiin dhanka Ammaanka iyo Xasilooni daro.
War kasoo baxay Waaxda Arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in sidoo kale lacagtaan ay ka qeyb ka tahay la dagaalanka Al-Shabaab.
“Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo USAID waxay ku maal-galin doonaan in ka badan $ 500 milyan Soomaaliya sanadkan. Taasi waxay ku darsan tahay in ka badan $ 1 bilyan oo ka mid ah gargaarka Qaramada Midoobay. Mid waliba waxan rajeynaynaa in maaliyaddani ay dib u soo celiso barwaaqo iyo xasilooni Soomaaliya”ayaa lagu yiri Warka kasoo baxay Mareykanka.
Dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in ay hubin doonto halka ay ku baxayso lacagtaan iyo in ay gaarto meeshii loogu tala galay.
“Waxaan hubin doonaa in lacagtaan ay marto Waddo sax ah oo keeni karta xasillooni iyo Al-qaacida laga tirtiro geeska Afrika” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Mareykanka.
Horaantii toddobaadkan ayaa sidoo kale Mareykanka waxay shaaciyeen lacag kale oo gaareyso 74 milyan taasi loogu talo-galay in lagu caawiyo shirkadaha yaryar ee Soomaalida, si maal gelin loogu sameeyo.
Previous articleHaweeney wariye ah oo waalatay kadib maryaha LIVE iskaga dhigtay (Video)
Next articleSomaliland oo war ka soo saartay wadahadal ay la sameyso Somalia (Akhriso)